Ọnwụ nke abụọ kụrụ na otu izu n'ihi Pokémon Go | Akụkọ akụrụngwa
Ọnwụ nke abụọ kụrụ na otu izu n'ihi Pokémon Go
Agbanyeghị na Niantic na-adụ ndị egwuregwu ọdụ ka ha ghara iji ngwa ahụ mgbe ha na-anya ụgbọala, ọtụtụ ndị ọrụ na-eleghara ihe ngosi ndị a anya na ihe ọghọm na-emecha mechaa. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-amata na iji ekwentị mgbe ị na-anya ụgbọala dị oke egwu ebe ọ bụ na ihe na-eme na nke abụọ ahụ ị kwụsịrị ile anya n'ihu, mana enwekwara ọtụtụ ndị ọrụ na-aga n'ihu na-eji ngwaọrụ mkpanaka ahụ n'azụ ụkwụ wee mee nke a. ọ dị njọ, na-egwu Pokémon Go ma ọ bụ yiri.Nke bụ eziokwu bụ na ụmụnwaanyị abụọ anwụọla n'izu a, ọzọ enweela nnukwu mmerụ ahụ site n'ihe ọghọm nke ndị ọkwọ ụgbọala abụọ gosipụtara ndị ọchịchị na ha ji ekwentị a na-egwu egwu. Okwu abụọ a emeela na Japan, na nke ikpeazụ a bụ ihe mberede na obodo Kasugai mgbe otu nwanyị ji ịnyịnya ígwè ya na-agabiga n'okporo ụzọ ọfụma nke TBS jụrụ.
Ọ bụ eziokwu na obodo na-ahụkarị ndị pere mpe na ndị ọrụ ole na ole na ekwentị ha mgbe ha na-anya ụgbọala, mana ọ dị ka mmadụ niile amaghị ihe egwu nke a nwere ma ndụ anyị ma nke ndị ọzọ. Iji ama, GPS, ịkpọ redio ma ọ bụ naanị ịdọpụ uche na wiil nke abụọ bụ otu n'ime isi ihe kpatara inwe ihe ọghọm, yabụ ọ dị mma ịghara imetụ ngwaọrụ ahụ aka ruo mgbe anyị ruru ebe anyị na-aga ma kwụsị "ịchụ nta" Pokémons mgbe ị na-anya ụgbọ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ọnwụ nke abụọ kụrụ na otu izu n'ihi Pokémon Go
Bloomberg na-ekwu 2017 iPhone agaghị enwe bọtịnụ ụlọ nkịtị
Hama ga --eweta Scooters ya abụọ na IFA na Berlin